कहाँ हराउँछन् किशोरी ? – Rara Khabar
कहाँ हराउँछन् किशोरी ?
*६ महिनामा दुई किशोरी बेपत्ता
*खोजी गरिदिन परिवारको माग
जाजरकोट २२, पुस
घरमा सुतेकी छोरी विहान एकाएक हराएपछि परिवारले भन्ठाने विवाह गरेर गईहोला । एक दिन वित्यो , दुई दिन वित्यो , हप्ता दिन वित्यो अनि मात्र परिवारमा चिन्ता छायो ।
फोन सम्पर्क गर्दा मोबाईल सुइचअफ । जाजरकोट भगवति ९ सिउनाकी दले कामीकी १५ बर्षिया छोरी निशा वि.क. गत मंसिर ७ गते देखि हराएपछि अहिले परिवारमा चिन्ता छाएको छ । उनको अहिले सम्म कुनै अत्तोपत्तो लाग्न सकेको छैन । सानो होटल÷पसल ब्यवसाय गरेर छिमेकी रुकुम गोतामकोट ९ दामाचौरमा उनको परिवार बस्दै आएको छ । सोही समयमा दामाचौरमा स्थानिय मेला समेत लागेको थियो । नेपाल राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालय भगवतिमा १० कक्षामा अध्ययनरत निशा एकाएक हराएपछि परिवारजनमा निकै चिन्ता छाएको छ । छोरी कतै विवाह गरेर गईकी भनेर धेरै ठाँउ सोधीखोजी गर्यौ, नजिकै रहेको भेरीनदीले बगायो कि भनेर पनि खोज्यौ तर केही पत्ता लागेन बाबु दलेले भने के गरौ हजुर म अभागीलाई दैव लाग्नु पर्ने । उनले छोरीको खोजी गरिदिन भन्दै प्रहरीमा समेत जाहेरी दिएका छन् ।
यस अघि पनि गत असारमा भगवति ८ का लक्षि मल्लकी १७ बर्षिया छोरी मीना मल्ल दमाचौरबाटै हराएकी थिईन । उनलाई पनि घरपरिवारले धेरै ठाँउ खोजे त केही पत्तो लागेन । मरेको वा कसैले मारेको भएपनि लास भेटिनु पर्ने बढो अचम्मको घटना भयो स्थानिय बालकुमारी सिहले भनिन । मीनाका बुवा लक्षिले पनि प्रहरीलाई छोरीको खोजी गरिदिन भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन् तर खोजीको लागी प्रहरीले पनि खासै चासो नदिएको उनले गुनासो गरे । मीना दामाचौर स्थित फुपुको घरमा बसेर सोही विद्यालयमा १० कक्षामा अध्ययनरत थिईन । एकपछि अर्को किशोरी एकाएक बेपत्ता हुन थालेको दलालहरुले भारतका कोठीहरुमा लगेर बेचेको हुन सक्ने स्थानियले आशंका गर्न थालेका छन् । दलालहरुले ग्रामिण भेगका केटीहरुलाई मायाजालमा पारे विवाहको बाहान वा शहरमा ठुलै जागिर लगाईदिने लगायतका प्रलोभनमा पारि भारतका कोठीहरुमा लगेर बेच्ने गरेको प्रहरीको भनाई छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका प्रहरी निरीक्षक हिक्मत बोहराले हराएको धेरै समय पछि मात्र प्रहरीमा खवर गरेकाले खोजी गर्न कठिनाई भएको बताए । प्रहरीले भगवतिका दुई किशोरी हराएको विषयमा आवश्यक अनुसन्धान गरिने जानकारी दिए । किशारीका परिवारजनले हराएका आफ्ना चेलीहरुलाई खोजी दिन नेपाल सरकार तथा अधिकारकर्मी सँग अपिल गरेका छन् ।
प्रकाशित मितिः २२ पुष २०७३, शुक्रबार १२:५६